XOG + AKHRISO: Toddobo qodob oo hor-taagan in doorasho qof iyo cod ka dhacdo Soomaaliya | HalQaran.com
XOG + AKHRISO: Toddobo qodob oo hor-taagan in doorasho qof iyo cod ka dhacdo Soomaaliya
Muqdisho (Halqaran.com) – Masuuliyiinta dowladda federaalka Soomaaliya ayaa wada qorshe ay doonayaan in dalka ay uga qabsoonto doorasho qof iyo cod ah, markii lagaaro dhamaadka sanadka 2020-ka.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa marar badan sheegay in dalka ay ka qabsoomi doonto doorasho qof iyo cod ah, islamarkaana aysan jiri doonin muddo korarsi iyo in dib loogu laabto nidaamka soo xulista Baarlamaanka ama nidaamkii doorasho ee ugu dambeysay ee ahaa doorasho dadban.
In kastoo madaxda dowladda Soomaaliya ay doonayaan in dalka ay ka qabtaan doorasho qof iyo cod ah ayaa hadane waxaa muuqda ilaa 7 qodob oo diideysa in doorasho nuucaas xiligaan ay dalka ka dhacdo, islamarkaana loo baahan yahay in laga fikiro qorshe kale oo isbadal maamul lagu gaaro 13 bil kadib.
Qodobada diidaya in dalka ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah ayaa waxaa ka mid ah ilaa 7-daan qodob oo muhiim ah doorashooyinka nuucaas oo kale ah.
1 – In la ansixiyo sharci doorashooyinka dalka oo ka soo gudbay Golaha Wasiirada, islamarkaana hadda horyaalla Golaha Shacabka kadib markii ay soo gudbiyeen guddi dib u eegis ku sameeyey sharcigaasi.
2 – In tiro koob lagu sameeyo guud ahaan Shacabka Soomaaliyeed maadaama uu dalka ka soo kabanayo bur bur iyo dhibaatooyin, islamarkaana aysan jirin tiro koob sax ah oo la sameeyay, kaas oo la isku raacsan yahay.
3 – Diiwaan gelinta cod-bixiyaasha ayaa sidoo kale ah qodob kale oo muhiim ah oo aysan la’aantiis waxba socon karin.
4 – Sidoo kale dalka kama jirto kalsooni amni waxaana qatar weyn ku ah Al-Shabaab, xataa ma jirto kalsooni amni oo lagu qabo magaalooyinka ay dowladda maamusho iyo kuwa maamul gobaleedyada.
5 – In la sameeyo Maxkamadda dastuuriga ah ee kala saari laheyd Xisbiyada markii la isku qabsado ama muran ka yimaado natiijada doorashada
6 – Dhameestirka qabya qoraalka dastuurka oo muddo dheer soo jiitamayay, kaas oo aan ilaa hadda xal laga gaarin.
7 – Iyo in la dhameeyo wadahadala Soomaaliya iyo Somaliland oo aan marna fariisan tan iyo wixii ka dambeeyay Xukuumadda hore ee Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud.
Falanqeeyaasha arimaha Soomaaliya iyo dadka yaqaana arrimaha doorashooyinka ayaa sheegay in ilaa laga helo 7-daas qodob in aysan dalka ka dhicin karin doorasho xor iyo xalaal ah oo ay dadweynaha Soomaaliyeed ku doortaan qofkii ay u baahnaayeen.
Ugu dambeyn, siyaasiga Cabdiraxaman Cabdishakuur Warsame ayaa todobaadkaan Yurub ka sheegay qaar kamid ah qodobadaan waxa uuna kamid yahay boqolaal kale oo aragtidaan aaminsan.
Doorashada Soomaaliya qof iyo cod